पोकली झरना घुम्न जाँदा | Ketaketi Online
Home » पोकली झरना घुम्न जाँदा
posted by ketaketionline on Sat, 05/09/2020 - 10:48
- अनुषा घिमिरे, कक्षा: नौ, सरस्वती मा•वि (जोरपाटी)
नेपाल एक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण देश हो। हिमालको सेता हिउँ,तराईको पहेँलो फाँट अनि पहाडको हरियो डाँडाले नेपाललाई सुन्दर,शान्त र विशाल बनाएको छ। यी सब कुरा मेरा लागि पढाइ र लेखाइमा मात्र सिमित थियो। तर जब मैले ओखलढुङ्गा लिखौ- नौ मा अवस्थित पोकली झरनाको अवलोकन गर्ने अवसर पाएँ तब मैले पढेका र लेखेका सबै कुराहरू छर्लङ्ग भए।
कक्षा नौ को अन्तिम परीक्षा सकिएपछि म, मेरो ममि, दिदी र दिदीको छोराछोरी मेरो ठुलोबुबा र ठुलोममिलाई भेट्न ओखलढुङ्गा (वाच्पु) गयौँ। बिहान छ बजे गाडि चढेका हामी काभ्रे,सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाई छाड्दै साझ सात बजे गन्तव्यमा पुग्यौ। अग्ला अग्ला डाँडा,छलछल बगीरहेको नदी,छागाँ र छहराको मज्जा लिदैँ हामी त्यहाँ पुग्यौ।
ठुलोबुबाको घर ओखलढुङ्गाको लिखु-नौ मा पर्दो रहेछ। भ्रमण वर्ष २०२० को भ्रमण गर्नु पर्ने एक स्थलको रूपमा सुचित पोकली झरना हामी बसेको ठाउँबाट नजिक पर्ने कुरा सुन्न साथ मैले गएको भोलि पल्टनै पोकली झरना हेर्न जाने प्रस्ताव राखेँ। सबैको मञ्जुरी अनुसार भोलि खाना खाएर पोकली झरना हेर्न जाने निधो भयो।
भोलिपल्ट बिहानै भिनाजु पनि लेतिबाट त्यहाँ आउनुभयो।हामी सबैले रमाइलो गफगाफ गर्दै खाना खायौँ र मनमा हजारौ नयाँ खुसी र उमङ्ग बोक्दै हामी सबैजना पोकली झरनाको अवलोकनका लागि जान तयार भयौँ।
बाटोमा पनि परबाट हेर्दा नै त्यति राम्रो देखिने पोकली झरना आज नजिकबाट आफ्नै आखाँले देख्न पाउँदा कस्तो होला भन्ने खुल्दुली मेरो मनमा थियो। हिडेँको करिब डेढ घण्टामा हामी पोकली झरना पुग्यौँ। छङ्छङ् बगेको झरनाको आवाज, त्यो हरियाली वातावरण, त्यो शितलता अनि दुध झैँ सेतो छागाँ देखेर मलाई त आफू स्वर्ग मानै पुगे झै महशुश भयो।जसरी झरनाको पानी छङ्छङ् तल झरिरहेको थियो त्यसरी नै म भित्र भएका नराम्रा सोच पनि त्यही बगेको पानीले बगाएर मलाई चोखो बनाएको जस्तो महशुश भइरहेको थियो। साच्चै नै झरनाको दृश्य यति मनमोहक थियो कि जस्तो सुकै मानिस पनि आफू भित्र भएको घमण्ड, नराम्रो सोच, आफ्नो दु:ख र पीडालाई त्यागेर त्यहाँको वातावरणमा रमाउन चाहन्छ जस्तो महशुश भइरहेको थियो। झरनाको सुन्दरताले लालायित भएका मेरा आखाँहरू झिम्किन पनि मानेका थिएनन्। केही समय झरनाको दृश्य अवलोकन गरेपछि ति सबैलाई हामीले आ-आफ्ना मोबाईलमा कैद गर्न लाग्यौ।
पोकली झरनाको उचाई झण्डै एकसय तिस फिट रहेछ। पोकली झरनाको उत्पति पनि पवित्र स्थलबाटै भएको जानकारी ठुलोबुवाले गराउनु भयो।पोकली झरनामा दुईवटा छागाँ रहेछन्। रगनी र पोकलीको सीमामा रहेकी चुलीदेवीको काखबाट मूल फुटेर वहेको पानी रगनीको सेलेले हुदै पोकली झरना मार्फत लिखु नदीमा मिसिदो रहेछ।झरनाको फेदमा रहेको दहलाई हाडीदह भनिदो रहेछ। उक्त दहमा पहिले पहिले दिउँसो र राती बाह्र बजे तामा पित्तलका भाँडा बजेको आवाज सुनिन्थ्योरे त्यसको नजिकै दुग्देश्वर महादेवको मन्दिर रहेछ जसले झरनालाई अझ शुद्द र सुन्दरता थपिदिएको छ।पोकली झरनाको दृश्य र त्यहाँको वातावरण निकै मनमोहित रहेछ। त्यही सुन्दरताका कारण वि सं २०६५, वि.सं. २०६६, वि.सं. २०६७ र वि.सं. २०७४ मा पोकली झरना महोत्सवको आयोजना भएको थियो रे। जहाँ प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू लगाएतका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू आएर आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्थ्यो रे। साथसाथै त्यहाँका वासिन्दाले आ-आफ्नो संस्कृति झल्काउदैँ कसैले झाकी, कसैले चण्डी नाचँ लगाएतका अन्य थुप्रै सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने जानकारी मैले प्राप्त गरेँ।
अहिले त्यहाँ पर्यटकहरूको सजिलोको लागि भर्याङ्को निर्माण कार्य चल्दैरहेछ।
बाटोघाटोको राम्रो सुविधा नभएकाले यस ठाउँ अरू जस्तो प्रख्यात हुन नसकेको मलाई अनुभव भयो। यस ठाउँको अझ विकास गर्न सकेमा यसले हाम्रो पर्यटन क्षत्रमा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। झरनाको प्रचार प्रसार र विकासका लागि पोकली झरना सेवा समाजको स्थापना गरी स्थानीय युवाहरू जागरूक भएपछि यो स्थानको विकास भएको जानकारी प्राप्त भयो।
यहाँका मानिसहरूको बिच एकता,मिलनसार भावना अनि एकअर्का प्रतिको विश्वास देखेर मलाई खुसी लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको भनाई चार जात छत्तिस वर्णको एउटो साझा फुलबारीको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मैले यो गाउँमा देखेकी छु।
पोकली झरनाको अवलोकन गरेर मैलेँ थुप्रै बाहिरी ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाँए।पोकली झरनाको त्यो रमाइलो दृश्य अझै पनि मेरो मन र मस्तिष्कमा ताजा छ। जसले मलाई जतिखेर समझिँदा पनि आन्नदित पार्ने गर्छ।